China Casserole e Round Umumo SKU NO.271-272-273-274-275-276 Abakhiqizi futhi Suppliers | SJZ JINXUAN
Tea Embizeni SKU NO.1534
Glass Tea Mug nge lemifanekiso SKU NO.1427
Ukuxuba Bowl SKU NO.2950-2951-2952-2953-2954
Single-Wall Glass Bottle SKU NO.1616-1617
Casserole e Round Umumo SKU NO.271-272-273-274-275-276
Bakeware nge ehlukanisayo SKU NO.2640-2642
Emangalisayo Ikhishi-to-Ithebula Versatility I Casserole ingilazi enza kube lula ukupheka ukudla ngaphambi kwesikhathi kanye nokugcina esiqandisini noma efrijini kamuva. Okuhle kunakho konke ukuthi ushintsho Casserole kahle kuhovini kunoma ithebula izilungiselelo bakhonze ngomusa, futhi okusele angaya asebuyele efrijini ekupheleni ebusuku. Sicela wazi: DO NOT ukuhambisa ingilazi Casserole ngokuqondile efrijini ukuze kuhhavini. Ake ukudla ncibilika ngaphambi ukupheka noma reheating kuhhavini. Qinisekisa ukuthi usebenzisa i-potholder lapho usingatha ...
Emangalisayo Ikhishi-to-Ithebula Versatility
Casserole ingilazi enza kube lula ukupheka ukudla ngaphambi kwesikhathi kanye nokugcina esiqandisini noma efrijini kamuva. Okuhle kunakho konke ukuthi ushintsho Casserole kahle kuhovini kunoma ithebula izilungiselelo bakhonze ngomusa, futhi okusele angaya asebuyele efrijini ekupheleni ebusuku.
Sicela wazi: DO NOT ukuhambisa ingilazi Casserole ngokuqondile efrijini ukuze kuhhavini. Ake ukudla ncibilika ngaphambi ukupheka noma reheating kuhhavini. Qinisekisa ukuthi usebenzisa i-potholder lapho usingatha ingilazi ashisayo.
Kuhhavini microwave Safe
Casserole ingilazi ingasetshenziswa ukubhaka noma reheat ukudla kuhovini ezivamile noma-microwave oven. Bona phakathi ingilazi izinhlangothi uvumele kwamandla NEKUKHULUMA ngentuthuko ukudla lapho ukubhaka, ukuhlinzeka isilawuli wanezela phezu imiphumela yokugcina.
Lezi casseroles zenziwa nge borosilicate ingilazi-ekahle ukunwetshwa ezishisayo ngakhoke kancane othambekele sokuqeda lapho zihlatshwa nokushintshashintsha kwezinga lokushisa.
Sicela wazi: Glass Casserole akufanele isetshenziswe ngaphansi hlupha, kwi stovetop, noma ngotshwala noma okusemathinini ukushisa izitofu njengoba ukushisa umthombo oqondile.
uhlangothi Uxhumano izibambo uvumele ephakamisa ngokuphepha casserole ingilazi futhi okuphuma kuhhavini futhi kusukela ekhishini etafuleni lokudlela noma lezitsha futhi emuva. I elula side izibambo ukusiza ukuqinisekisa nokubambeka okuphephile, ngisho nalapho egqoke obukhulu kuhhavini mitts.
Previous: Casserole e Okusaqanda Umumo SKU NO.277-278-279-2710-2711
Okulandelayo: Jasper Coloured Borosilicate Glass SKU NO.2670
Izingubo zokupheka Casseroles
Casserole e Round Umumo SKU NO.273D
Casserole e Okusaqanda Umumo SKU NO.2712
Casserole e Okusaqanda Umumo SKU NO.277-278-279-2710 ...
Casserole e Round Umumo SKU NO.272D
Casserole e Round Umumo SKU NO.274D
2019 ambiente Frankfurt Booth ukushisa ukumelana ...
Double Walled Tea Glass, Borosilicate Glass Ukudla Isitsha , Borosilicate Glass Casserole , Borosilicate Glass Bakeware , Borosilicate Glass Ukudla Iziqukathi , Borosilicate Glass Pot,